Ufuna ukuba ubaba omuhle? Funda indlela ukuba abe
Ikhaya Nomkhaya, Ngubaba
Lokho kuyinto - ukuze abe ubaba? izingane obusa uyise siguqulwe ne ekukhuleni komphakathi kanye nokubona ekushintsheni mayelana bendabuko nezindinganiso zomkhaya. Ukusebenzisa ngezansi izeluleko ezinhle, uyise bangazisiza kanjani izingane zabo ziba eqiniseka kakhudlwana, ukukhulisa yabo ukuzethemba. Uzokufunda kanjani ukubhekana nezingane futhi ubasize ukuba nothando ngempela.
Ezinsukwini imikhaya yethu zingase zishintshe kakhulu. Abaningi bokukhulisa ingane kuphela, abanye abantu abashadile bakhethe ukuba angashadi, abanye baphila abantu asebebadala. Eshumini leminyaka elidlule kuye kwashintsha indlela umphakathi ozibheka ngayo kuyinsakavukela, isibalo sabesifazane abasebenza liye landa inani labantu abahlukanisayo futhi remarriages. Konke lokhu kuthinta izindima komama kanye zoyise.
Ukuxhumana noyise wengane yesimanje wehlukile lokho kwenzeka eminyakeni eyishumi edlule. Obaba babe namathuba amaningana futhi indlela ehlukile kanjani ukuze sonke sifeze indima yayo. Umuntu namuhla ayisekho ancike siqu okuhlangenwe nakho kwabo ebuntwaneni ngokuzenzakalelayo. Uyakuqonda ukuthi ukuziphatha uyise omzalayo isivele endaweni empeleni yethu. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukuqonda futhi ezinhle obaba, abantwana bakhula ephakeme ukuzethemba. Bona kwenziwe umsebenzi othe xaxa ngo-kuphila, athandwa kakhulu kunezinye futhi sebejwayele kahle. Ubaba onothando kuqinisekisa ukwesekwa kakhulu ngaphandle ephoqelela intando yabo. Ngakho kanjani ukufeza okuhle ubuhlobo phakathi kukababa nomntwana? Zama enye yalezi amathiphu!
Chitha isikhathi nengane yakho
Lapho ubaba echitha isikhathi ingane ndawonye, ongabonisa kuye izinto zabo eziyigugu. Izingane zikhula ngokushesha, ngeke abe esikahle ngaphezulu ukusungula yokukhulumisana. Kunezindlela eziningi kakhulu ukuzijabulisa izingane.
Mane ukhulise futhi onothando ngesimo sengqondo esiqondile
Zonke izingane kumele zidle ababonisa isithakazelo esihle nesiyalo, hhayi isijeziso. Udinga nje ufunde indlela yokusetha silinganisela ngendlela enengqondo. Obaba kudingeka ukukhumbuza izingane ngemiphumela izenzo zabo futhi ngendlela eyakhayo ukuze sikubonise lokho kuziphatha esikufisayo. Ubaba, kwazi bani ukuthi ukuxoxa ngomoya ophansi futhi okunengqondo, ubonisa kahle uthando izingane zabo.
Yiba yisibonelo sokuthi ingane
Akunandaba ngisho noma ngabe ingane yena uyabona ukuziphatha kukayise njalo isetshenziselwa umfuziselo wakhe. Intombazane ochitha isikhathi ubaba onothando, likhula ulwazi kufanele ukusingatha kanjani. Ulindele guys nenhlonipho futhi azi ukuthi yini okufanele uyibheke umlingani. Obaba ukufundisa ebalulekile kokubili abafana namantombazane, obonisa ukwethembeka, ukuthobeka, ukuba nesimo sengqondo wemfanelo.
Hola ilungelo ukunakwa
Obaba kufanele uqale ukuxoxa izinto ezibaluleke nezingane zabo kusukela zisencane. Kulokhu, imibuzo enzima kunazo okuzovela eminyakeni, kuyoba lula ukuxazulula. Chitha isikhathi ulalele imibono kanye nokukhathazeka ingane.
Yiba uthisha wengane yakho
Ukuze abe ubaba omuhle, kufanele bafundise izingane zabo okulungile nokungalungile. Bakhuthaze ukuba baziphathe kahle. Qinisekisa ukuthi ingane benza isinqumo esifanele. Nesithakazelo indlela abantu abakhuliswe ngayo ubaba ebonisa nsuku zonke izingane izibonelo kwesokudla evumela ukufunda izisekelo zokuphila.
Ingxenye ebalulekile yokuphikelela komkhaya okujabulisayo - kwakusihlwa ndawonye. Inikeza izingane ithuba lokuxoxa nabazali bazo ngalokho ababekwenza nokuthi uhlela ukwenzani. Lesi yisikhathi esihle uyise ukulalela izingane futhi ubonise ukulalela kwabo. Lokhu kwakha isisekelo sokukhulumisana nomkhaya.
Funda ngokuzwakalayo ingane yakho
Kuleli zwe lanamuhla kwabantu sizungezwe ithelevishini ne-Internet. Kubalulekile ukuthatha izinyathelo bayazi ukuqinisekisa ukuthi ingane uthande ukufunda. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ukuwufunda ngokuzwakalayo. Qala ukufunda kusuka eminyakeni yokuqala, bese ufundisa ingane yakho ukufunda ngokuzimela. Ekugxiliseni uthando lokufunda - kuyindlela engcono ukuqinisekisa ingane ukuthuthukiswa siqu futhi umsebenzi esikhathini esizayo.
Hlonipha nomama wengane yakhe
Abazali abahloniphanayo futhi silibonisa izingane, ukudala isimo sokuphepha. Lapho izingane zazi ukuthi abazali bahloniphane, kulula ukuzizwa ukuthi, futhi, ukwamukela kanye nenhlonipho.
Qala ukwenza ngokushesha ngangokunokwenzeka
Bonisa isithakazelo ingane yakho esesesiswini yayo. Zama ukuqonda indima kayise ngesikhathi ekhulelwe noma ukwamukelwa. Qala uthinte umntwana, uyibambe, ukudlala futhi ukhulume naye kusukela ezinsukwini zakuqala. Lapho uyise imatasa bekhuphula umntwana, ngokucacile uyibonisa ukuthi unesithakazelo kuyo, nokuthi lezi ubudlelwane kukhona ezibaluleke kakhulu kuye.
Hhayi kuphela ngenxa yokuba ezinye umcimbi Ungashintsha lokuphila komuntu ewusana. Lubhekele omunye umuntu - lokhu kuyinselele engathí sina ukuthi uletha eningi izikhathi ujabule. Ayikho into enhle ezingaphezu kuka ukubukela, njengoba ingane ikhula futhi isingumuntu omdala. Uma usebenzisa amathiphu ngenhla, ungafunda imfundo ngibe nguyise omkhulu, ukuqonda futhi inothando.
Kuphi futhi nini lugujwa uSuku Lobaba
Indlela yokwenza ekunqanyulweni ilungelo lobuzali nguyise
Isehlukaniso ku-Thriller uhlobo
6 izinto odinga ukukwazi zoyise izingane ezimbili
Ukulungiselela "sodium Sulfatsil". imfundo
Kungakanani ingane kufanele acabangisise?
Solyanka ne isoseji: njengoba kungaba
Ukumaketha mqondo e-ibhizinisi
Kuyini foie Gras futhi okuyindawo senziwa
Stroller "Capella 901": Izibuyekezo (izithombe)
Indlela yokwenza chocolate hot ekhaya: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi
Sergei Maslennikov: Biography kanye nomsebenzi impikiswano
I amaprotheni ku umchamo. kungenzeka ahlukahlukene Izizathu
Disaster movie "Akunakwenzeka. ' Abalingisi kanye izindima